Ụgbọ mmiri ...
Ụgbọ mmiri ... 3 afọ 4 ọnwa gara aga #197
Chọpụta ga-achọ ịhụ otu ma ọ bụ abụọ WWII ụgbọelu na-ebu.
Ụgbọ mmiri ... 3 afọ 4 ọnwa gara aga #198
ya mara na ọ bụghị a ọjọọ echiche nwoke!
Ụgbọ mmiri ... 3 afọ 4 ọnwa gara aga #202
Kedu ihe na-ekwesịghị ịhụ n'anya? M kwuru eziokwu? 1 ma ọ bụ 2 WWII ụgbọ mmiri na-ebu. Ekwela ka m mehie, ahụrụ m slammin 'na oche anyị nwere ugbu a, mana ọ bụ obere ez na Corsair ọhụrụ (n'agbanyeghị na abụghị ụgbọ elu WWII, ọ na-eji otu ụgbọ ala ahụ). Ihe kachasị ọhụrụ n'ime ụgbọelu na-ebu ụgbọelu bụ goooody. N’ezie, nwamba nile nke Grumman nwere ebe pụrụ iche n’obi m. Enwere m fsx ụdị nke dị ka ihe bitchin 'WWII flat top, enweghị ike ịmata etu esi etinye ya. Ọ nweghị otu nrụnye Rikooo nwere. Nwetara ọsọ, (n'ụzọ nkịtị, mere ụfọdụ joggin ')
Back to n'ígwé ojii, PAYSON
Ụgbọ mmiri ... 3 afọ 4 ọnwa gara aga #207
Apụghị m ekweta ihe. mgbe niile fun na-agbalị na na-na ihe authentic dị ka o kwere
N’eziokwu n’ezie n’enweghị ihe m ga-esi wụnye ụgbọ elu ahụ n’enweghị faili ahụ n’ihu M. Enwere m ike iwere ya na ị ga-etinye ya n’ebe nchekwa ihe nkiri dị, ma ọ bụrụ na etinyeghị ya na akpaghị aka FSX, tinye ya na aka gi…
Oge ike page: 0.254 sekọnd